ကျွန်ုပ်တို့၏ furry အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များထိုသူတို့အဘို့အမဲသားကိုတစ်အရသာအပိုင်းအစသို့မဟုတ်အချို့သောအခြားခဲဖွယ်စားဖွယ်လေ့ကျင့်ရေး၌ကြီးစွာသောလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်နိုငျသညျ, အတော်လေးကြီးမားတဲ့နှင့် fastidious အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အသက်အဘို့အပေါငျးတို့သလိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့သတင်းစကားများပါဝင်သည်လျှင်ပင်, တိရစ္ဆာန်နှောင့်အယှက်ပေးနိုင် Monotonous အစားအသောက်များတွင်။ လူတတူညီတဲ့အစားအသောက်မကြာမီမခံနိုင်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, နှင့်တိရိစ္ဆာန်များလည်းခံစားချက်တွေကိုရှိသည်ကြောင့်, သူတို့ကစောင့်ရှောက်မှု၏တစ်အသိမလိုအပ်, သင်ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်များအတွက်အသုံးဝင်သော၎င်း၏ Goodies များ၏ဝယ်ယူအတွက်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ဤအမှုအရာစိတ်ဝင်စားတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများသာဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်, ဒါပေမယ့်လည်းလူသိများထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီး။ ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်သာသူတို့ရဲ့ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်ချစ်ရာသခင်သည်ရပ်ကွက်, ဒါပေမယ့်လည်းစက်ရုံမှာလုပ်အဆင်သင့်လုပ်ခဲဘွယ်စားဘွယ်၏အကွာအဝေးအဘို့ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိုပြင်ဆင်နေများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားပါ။
ကြောင်အဘို့အဘယ်သို့၎င်း၏ Goodies စတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူရနိုင်သနည်း
Gimpet, Dreamies, Tomi, B, & B, Vitakraft အခြားကုမ္ပဏီများ - အဆင်သင့်ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကုမ္ပဏီများမှ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်။ ဤသည်ပူစီနံနှင့်အတူခိုင်ခံ့သောသကြားလုံး pudding, ဒိန်ချဉ်, ပုစွန်များနှင့်စည်သွပ်ဘူး, တူနာငါးထုတ်ကုန်, ကြက်သားနှင့်ကဏန်းတဖဲ့, ဒိန်ခဲလိပ်၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကုမ္ပဏီကကုန်သွယ်, ပုံမှန်မဟုတ်သောမူရင်းနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုအောင်လှည့်ကွက်အမျိုးမျိုးကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ရယူထားသောတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးဘဏ်တွေအတွက်ပိတ်ဆို့ပျင်းစရာကောင်းကြည့်ရှုစည်သွတ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ mouse ကို၏ပုံစံအတွက်ဟင်းလျာများ, နှလုံး, ပူစီနံဘောလုံး, ဝါးချောင်းတွေ, သားညှပ်ပေါင်မု - ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကြိုဆိုမျက်မှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းခြင်း, ထုပ်ပိုးကိုကြည့်ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဆုပ်ကိုင်ရဓာတုအစိတ်အပိုင်းများအသေးဆုံးနံပါတ်ရေးစပ်ထားတဲ့သူတို့သာထုတ်ကုန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရသာ enhancers, နှင့်ဆေးသုတ်အစာခြေတိုးတက်လာဖို့ကူညီမည်မဟုတ်ပေမယ့် တည့်မှု အကြောင်းရင်းအလုံအလောက်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စကားမစပ်, အချို့သောအထူးကြေးဇူးတငျကွောငျး curative အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်အခြေခံတဲ့အစားအစာနှင့်အစားအစာအဖြစ်အရသာများပိုထစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ခြင်း, အစာအိမ်ထဲကနေဆံပင်ဖယ်ရှားပစ်ရန် Zubkov အပေါ်ပြားဖယ်ရှားခြင်းအဘို့အထိခိုက်မခံတဲ့အသားအရေ, အရသာရှိတဲ့ရိက္ခာနှင့်အတူပြဿနာများကြုံနေရကြောင်များအတွက်ရယူထားသောရှိပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအလွန်လျှင်မြန်စွာသူတို့ကိုအစာစားလျှင်, ဝါးတုတ်သို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်းဝယ်ဖို့အဖြစ်စားဘို့အချိန်ပိုမိုလိုအပ်သောအခြားအလားတူပစ္စည်းများ, ။
အသည်းကနေ meatballs ။
minced အမဲသားအသည်း (150 ဂရမ်) Making, ဒီမှာနေတဲ့ကြက်သားကြက်ဥ, ရေ (1/2 ခွက်ကို), မုန့်ညက် (250g) ထည့်ပါ။ soft မုန့်စိမ်းတစ်ဦးဝက်အူချောင်းသို့လှိမ့်နှင့်ကြောင်တစ်ကောင်မှာတခါသူတို့ကိုအစာစားနိုင်ထိုကဲ့သို့သောနှစ်ပိုင်းဖြတ်သည်။ အဆိုပါဆူရေထဲသို့အပိုင်းပိုင်းပစ်။ သူတို့ထဲကတူးယူနေကြတစ်ချိန်က meatballs, float အခါ။
အခြောက်အသား Cube ။
သငျသညျငါးသို့မဟုတ်အမဲသားကိုဝယ်ယူလျှင်သင်အရိုး, အဆီ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အသားထုတ်ကုန်များ၏အခြေအနေမျိုးကနေကိုပြင်ဆင်သောအအေးမိဟင်းရည်အတွက်ကအားလုံးကိုစိမ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှလုံး, အဆုတ်သို့မဟုတ်အစာအိမ်ချပ် optional ကိုစိမ်။ လိုချင်သော size ကို2ဆပိုဖြစ်ကဲ့သို့သောပြင်းအားအပေါငျးတို့သဝေမျှခုတ်ဖြတ်။ ကျနော်တို့ကသူ့သတ္တုပါး တင်. ရန်, မီးဖိုအတွက်ဗန်းအပေါ်၎င်း၏ Goodies ၏အနာဂတ်၌ထားလေ၏။ အပူပိုင်းခဲဘွယ်စားဘွယ်အဆင်သင့်အထိအနိမ့်အပူချိန်မှာလိုအပ်ပါတယ်။
အရေးကြီးသောအရာပင်အများဆုံးအကြိုက်ဆုံးအားရစရာကြောင်အဓိကအစာကျွေးခြင်းအဖြစ်မှတ်မရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျမှတ်ချက်ချသည်။ များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသည်၏ဤက high-ကယ်လိုရီအစားအစာများနှင့်နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းအဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဤရွေ့ကား၎င်း၏ Goodies တစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်သင့်လျော်နေကြသည်, သူတို့ကကူညီ သည့်လေ့ကျင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အစားအစာမျိုးစုံဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေး။
ခွေးအဘို့အ forage Grandorf
ဒယ်အိုးအတွက် Lenten ကိတ်မုန့်
နှစ်ဦးစလုံးကညီအစ်ကိုတွေ Weinstein လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်သံသယ
လီယိုနာဒို - လိင်တူချစ်သူ?
ဂေါက် - ရောဂါအမျိုးအစားကဘာလဲ?
Kylie Minogue ၏တိုးတက်မှုနှုန်း
Bedstraw - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
Cichlids - မျိုးစိတ်
သားအိမ် 1 ဒီဂရီ၏ Hypoplasia
ဂျစ် Bardot လှုပ်ရှားမှု #MeToo ခွေုံနှင့်အန္တရာယ်များကိုခေါ်
ကိတ် Hudson ဒန်နီ Fudzikavoy အသည်းအသန်နမ်းနဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်
စိန့်ဗယ်လင်တိုင်းကိုအဘယ်သူကြီး - ကစစ်မှန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့သူ့ကိုယ်သူသရဖူဆောင်းလိင်တူချစ်သူခဲ့သလား
Drew Barrymore ရဲ့အသစ်ဝတ္ထု